🥇 ▷ DeepL, turjubaanka caqliga leh ee leh nooca Windows iyo Mac ✅
DeepL, turjubaanka caqliga leh ee leh nooca Windows iyo Mac
In kasta oo ayan ahayn wax furaya war ama ka muuqda bogga hore ee wargeysyada, tarjumida ayaa la soo saaray si weyn ayaa sannadihii ugu dambeeyay looga mahadcelinayaa tikniyoolajiyadda. Tusaalaha ugu caansan waa isticmaalka Google suuragalnimada codka iyo fiidiyowga in loo turjumo waxa aan ku hadlayno waqtiga dhabta ah ama waxa ka muuqda sawir ama qoraal aan ku foogannahay kaamirada taleefanka.
Horumar kale oo xagga horumarinta ah ee tarjumaadda ayaa ah adeegsiga sirdoonka macmal. Aaggan, waxaan ka wada hadalnay mashruuca Yurub in muddo ah Deepl, oo laga sameeyay Jarmalka taasna waxay u adeegsanaysaa AI si ay u horumariso tarjumaadeeda.
La jaan qaada Isbaanish, Ingiriis, Faransiis, Jarmal, Boortaqiis, Talyaani, Holand, Booliish iyo Ruush, hadda, DeepL waa waa bilaash websaydhkeeda rasmiga ah, halkaas oo ay suurtagal tahay in lagu dhejiyo qoraal ama jiid dukumiinti u tarjunso ilbidhiqsiyo. Intaa waxaa u dheer, waxay leedahay ikhtiyaar bixin dheeraad ah oo lacag bixin ah kuwa raba inay ku adeegsadaan hordhac ahaan iyo xirfadaha.
Horumarkii ugu dambeeyay ee mashruuca Deepl waa in lagu wareejiyo teknolojiyadaada websaydhka desktop-ka loona adeegsado qalab aan awoodno ku rakib Windows iyo macOS. Sidaas awgeed, annaga oo adeegsanayna furaha fudud ee keyboard waxaan heli doonnaa caawinta DeepL si aan u turjunto qoraallada annaga oo aan ku xirnaynna codsiga aannu furanayn wakhtigaas.
Tusaale isticmaalka. Waxaan akhrinaynaa dukumintiga Ereyga ah oo Ingiriis ah mana fahmin jumlad gaar ah. Tan iyo Windows, xulo weedhaas, riix isku darka laba jeer CTRL + C iyo DeepL ayaa noo sheegi doona waxa loola jeedo Oraahdaas oo ku qoran luuqadeena la soo xulay. Haddii ay dhacdo inaad isticmaasho Mac leh macOS, iskudarka la isticmaali doono ayaa noqon doona CMD + C laba jeer si loo nuqulo qoraalka oo ay DeepL u tarjunto.
Intaa waxaa sii dheer, marka aan ku aragno tarjumaadda shaashadda waxaan fursad u yeelan doonnaa u isticmaal dukumintiga Waan furnay. Oo haddii aad doorbideyso, nooca desktop-ka ee DeepL ayaa sidoo kale bixiya daaqad meesha lagu dhejiyo qoraalka oo ay u arkaan tarjumaadda sida ay u bixinayaan qaabkeeda shabakadda.
Inta soo hartayna, Nooca DeepL desktop loogu talagalay Windows iyo macOS waxay bixiyaan faa’iidooyin isku mid ah noocyadooda internetka: turjumaad dhakhso leh oo sax ah, isu-dhigma erey kasta oo taageeraya tarjumaado dhowr ah, iwm.
Waxaad ka heli doontaa macluumaad dheeraad ah bogga rasmiga ah ee ‘DeepL’ iyo bogga desktop DeepL desktop Windows iyo Mac.